Asabotsy 13 Novambra 2021
Ny Peratra Ny tontolo voajanahary dia mihetsika tsy mihetsika, satria mandanjalanja ny filaminana sy ny korontana. Ny famolavolana tsara dia noforonina amin'ny fihenjanana mitovy. Ny toetra mampatanjaka, hatsaran-tarehy sy dynamism dia avy amin'ny fahafahan'ny mpanakanto mijanona ho misokatra amin'ireo mpanohitra ireo mandritra ny asa famoronana. Ny ampahany vita dia ny fitambaran'ny safidy maro nataon'ny artista. Ny eritreritra rehetra ary tsy misy fihetseham-po dia hiteraka asa mafy sy mangatsiaka, fa ny fahatsapana rehetra ary tsy misy fifehezana miteraka asa tsy mahavita maneho ny heviny. Ny fifandraisan'ny roa tonta dia ho fanehoana ny dihin'ny fiainana samirery.
Zoma 12 Novambra 2021
Jiro Ny jiro dia natao voalohany amin'ny marika kidswear. Ny fitaomam-panahy dia avy amin'ny kilalao capsule izay azon'ny ankizy avy amin'ny milina fivarotana izay mazàna ao amin'ny fivarotofototra. Raha mijery ny jiro dia mahita karazan-jaza miloko marevaka marevaka, samy manana faniriana sy fahafinaretana izay manaitra ny ain'ny tanora tanora. Azonao atao ny manamboatra ny isan'ny sela sy ny atiny ho soloina araka izay tianao. Avy amin'ny zava-manahirana andavanandro ka hatramin'ny haingon-trano manokana, ny zavatra tsirairay ao am-ponao amin'ny kapôty dia lasa fitantarana miavaka ho anao manokana, ka manelingelina ny fiainanao sy ny toeranao ao anatin'ny fotoana manokana.
Alakamisy 11 Novambra 2021
Alarobia 10 Novambra 2021
Talata 9 Novambra 2021
Sy Fifampiraharahana Ny Peratra Jiro Ny Sinema Ny Birao Ny Kafe